South African port workers refuse to move arms for Zimbabwe - The AK Files Forums
South African port workers refuse to move arms for Zimbabwe
JOHANNESBURG, South Africa - South African port and truck workers are refusing to move weapons from a ship that docked in the country on its way to Zimbabwe, union officials said Friday.
The Congress of South African Trade Unions applauded the stance by the South African Transport and Allied Workers Union, and reiterated its calls for Zimbabwean electoral officials to release the results of the March 29 presidential elections.
Human rights groups say there has been increasing violence against Zimbabwe's opposition supporters in the postelection period. The Zimbabwe Doctors for Human Rights group says its members has treated more than 150 cases of injuries consistent with assault and torture since the vote.
On Thursday, South African government spokesman Themba Maseko said officials could not intervene to stop the Chinese arms shipment from reaching Zimbabwe as long as administrative papers were in order.
The An Yue Jiang, a Chinese ship carrying the weapons, was anchored just outside Durban harbor after receiving permission late Wednesday to dock.
Still, Maseko made South Africa's strongest comments about Zimbabwe, criticizing the failure to release election results and calling the situation "dire."
A South African government official, speaking on condition of anonymity because of the sensitivity of the issue, confirmed that there are weapons on board the Chinese ship but gave no further details.
The Southern Africa Litigation Center, an independent human rights group, said Friday it has asked a court to stop the arms from being transported on to Zimbabwe.